Artois iiloji, amabhabhathane - I-Airbnb
Artois iiloji, amabhabhathane
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCathy
kufuphi Vimy, phakathi Lens kunye Arras kwi 10mn, ufumane umandlalo enomgangatho omnye nesidlo ezithathwa iinkwenkwezi 3 abantu 2/3, namnikelo lonke intuthuzelo mihla emaphandleni, ukuba izinto eziye zenziwe baninzi, iisekethe zemigodi, inkumbulo, ubugcisa kunye neLouvre-Lens kunye nezikwere zembali zeArras, ukuhamba, ukunyuka komthi; Ukuhlala ezilalini, ndihlala ndifumaneka ukukunceda ufumane ubutyebi bommandla wethu ...
Indawo yokuhlala inabo bonke ubuntofontofo bale mihla nge-tv kunye ne-wifi, ibhedi yenziwe xa ufika, unendawo yokuhlala yabucala yeebarbecues zakho, sikubonelela ngeebhayisekile kunye nezixhobo zomntwana ukuba kuyimfuneko.
kwilali eluhlaza singqongwe umendo ekuhambeni, kunye iimbono olubonakala Vimy Ridge kunye umqokozo iimfumba SLAG, isiphathele ipaki yiyakudlala abantwana, isixeko-ipaki kunye yokudlalela. iibhola, yobuciko predisposes ukuba utyelelo ku eLouvre.
Ndihlala ndifikeleleka ngexesha lokuhlala kwakho naluphi na ulwazi
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$316
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arleux-en-Gohelle